Internet Security | Internet Security Software - Bitdefender Myanmar
ဗိုင်းရပ်စ်တစ်ခုကို ယနေ့ပင် ရှင်းထုတ်လိုက်ပါ !
Windows ပေါ်ရှိ အင်တာနက် ခြိမ်းခြောက်မှုများအား အံတုသည့် အကောင်းဆုံး လုံခြုံရေး
Ransomware ကုသဖြေရှင်းခြင်း နှင့်အတူ အလွှာပေါင်းစုံ ransomware ကာကွယ်မှု IMPROVED
ကွန်ယက် ခြိမ်းခြောက်မှု ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း - တိုက်ခိုက်မှုများ မစတင်ခင်ကပင် ၎င်းတို့အား ရပ်တန့်ပေးသည်။ NEW
Bitdefender VPN နှင့် Bitdefender Safepay ကဲ့သို့သော လုံခြုံရေး tool များ ပါဝင်သည်။
Bitdefender Internet Security 2020 သည် သင့်စနစ်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်အပေးအယူညှိခြင်း မလိုဘဲ malware အား ချက်ချင်း တုံ့ပြန်သည်။
Bitdefender Internet Security 2020 တွင် အလွယ်တကူ install လုပ်နိုင်၊ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစွာ စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းနိုင်သော အလွန်နားလည်ရလွယ်ပြီး သုံးစွဲရအဆင်ပြေသော interface တစ်ခုပါရှိသည်။
Windows အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ကာကွယ်မှု
Bitdefender Internet Security 2020 သည် သင့်အား အရေးကြီး လုပ်ဆောင်မှုစနစ်များအားလုံးတလျှောက် အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုအံတုသော အကောင်းဆုံး anti-malware ကာကွယ်မှုကို ပေးသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင်ရနိုင်သော လုံးဝ အင်အားပြည့် ထိရောက်မှုအရှိဆုံး anti-malware solution . Bitdefender Total Security 2020 သည် အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုအားလုံး (ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ worm များ နှင့် trojan များမှ စ၍ ransomware, zero-day exploit များ, rootkit များ နှင့် spyware တို့အထိ) ကိုအံတု လုပ်ဆောင်သည်။ သင့်အချက်အလက် နှင့် လှို့ဝှက်သီးသန့်ဖြစ်တည်မှုကို လုံခြုံစေသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Bitdefender Total Security 2020 သည် အွန်လိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုများ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားခြင်းနည်းလမ်းတို့တွင် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများကို ယူဆောင်လာသည်။ ၎င်း၏ အသစ်သော ဆိုက်ဘာ ခြိမ်းခြောက်မှု intelligence နည်းပညာများသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ကွန်ယက်ပေါ်မှလုပ်ရပ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ကာ ရှုပ်ထွေးသော exploit များ၊ malware သို့မဟုတ် botnet နှင့်ဆက်ဆိုင်သော URL များအပြင် ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုများ ကို တားမြစ်ပိတ်ပေးသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Bitdefender Total Security 2020 သည် သွားလာလှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဟုခေါ်သော နည်းစနစ်တစ်ခုကိုသုံးကာ အသုံးပြုနေသော အက်ပလီကေးရှင်းများကို အနီးကပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်သည်။ ၎င်းမှ သံသယဖြစ်သည်ဟုထင်သည့်အရာကို စုံစမ်းမိသည့်အခိုက်အတန့်တွင် ၎င်းသည် ကူးစက်တိုက်ခိုက်မှုများကိုကာကွယ်ရန် ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှု ယူသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ် စီစစ်ခြင်းနည်းပညာသည် သင့်အား ဒုက္ခရောက်စေမည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအပေါ် ဘယ်တော့မှ မရောက်သွားစေရန် သေချာစေသည်။ သင်လင့်ခ်တစ်ခုအား အမှန်တကယ် မနှိပ်မိခင် သင့်ရှာဖွေမှုရလဒ်များမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်လုံခြုံမှုရှိမရှိကို အဖြေရှာပါ။ Bitdefender Total Security 2020 သည် မြင်သာသော ကူးစက်ခံထားရသည့် လင့်ခ်များအားလုံးကိုလည်း တားမြစ်ပိတ်ပေးသည်။
အွန်လိုင်း အလိမ်အညာအီးမေးလ်များမှာ တိုးမြှင့်လာသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆင့်မြင့် anti-phishing ကာကွယ်မှုသည် သင့်အား အန္တရာယ်ကျရောက်မှုမှ လွယ်ကူစွာပင် ကာကွယ်ပေးသည်။ Bitdefender Total Security 2020 သည် လှို့ဝှက်ကုဒ်များ သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ်များကဲ့သို့သော ငွေကြေးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကို ခိုးယူရန် စိတ်ချရသည့်အသွင်ယူထားသော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို စုံစမ်းရှာဖွေပြီး တားမြစ်ပိတ်ပေးသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Rootkits ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသည့် ဗိုင်းရပ်စ်အချို့ကို Windows မစတင်မှီကပင် ဖယ်ရှားပစ်ရန် လိုသည်။ Bitdefender Total Security 2020 မှ ထိုခြိမ်းခြောက်မှုများကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းမိသောအခါ ၎င်းသည် ရှင်းလင်းခြင်း နှင့် ပြန်လည်တည်ထောင်မှုအတွက် ကွန်ပျူတာကို ကယ်ဆယ်ရေး mode အနေဖြင့် ပြန်အစပြုသည်။
Bitdefender Internet Security 2020 နှင့်အတူ သင်သည် စွမ်းအားမြင့် ကွန်ယက်ကာကွယ်မှု၏ အလွှာတစ်ခုကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အလက်များအား ဟက်ကာများနှင့်အချက်အလက်ခိုးယူသူများရန်မှ လုံခြုံစေသည်။ . ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ဤ ဆန်းသစ်၊ ထူးခြားသော နည်းပညာသည် Bitdefender Total Security 2020 အား သင့်ကွန်ပျူတာစနစ်၏ hardware နှင့် software ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုတို့အပေါ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ကူညီပေးသောကြောင့် တွက်ချက်မှုအရင်းအမြစ်များကို သက်သာစေပြီး မြန်နှုန်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုကို တိုးမြှင့်စေသည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Bitdefender Total Security 2020 သည် သင်ကစားနေချိန်၊ အလုပ်လုပ်နေချိန် နှင့် ရုပ်ရှင်တစ်ကားအားကြည့်နေချိန်တို့ကို စုံစမ်းထောက်လှမ်းသောကြောင့် ၎င်းသည် သင့်အား မလိုအပ်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့် မနှောင့်ယှက်မိစေရန် သိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် အရေးကြီးအရာအပေါ် အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်။ သင့်စက်များပေါ်တွင် သင်လုပ်မည့်အရာကို ရွေးချယ်သည့်အပေါ်မူတည်၍ Bitdefender သည် pop-up များ ကိုယာယီတားဆီးပေးပြီး အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ setting များကို ညှိပေးကာ အရေးမကြီးသော နောက်ခံလုပ်ဆောင်မှုများကို ရပ်နားထားပေးခြင်းဖြင့် သင့်စက်အား အသုံးပြုခြင်းအပေါ် အမြင့်ဆုံးစိတ်ကျေနပ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။